UNIBIZ : Home
Welcome to UniBiz Co.,Ltd
To seek as the recognized and trusted firm in the industry and community, retaining, developing and attracting the best in committed construction leadership and to drive deliberate and intelligent growth of the company by continually identify, assess and implement the measures and steps that improve the company's Quality Management System.
To bearespectable firm delivering beyond expectation, ever by providing the best constructionexperience through relationship build on integrity success build on performance. Force byacommitment to continual improvement both personality and professionally.
It is the policy of UniBiz Co.,Ltd.to provide Construction, Logistic,Trading ,Export Import to the customer's satisfaction In order achieve this Policy, the following shall be established and complied with:
Ensure compliance with all applicable regulations and requirement regarding the services provided.
Identify customer requirements,meet the requirements and carry out the services with team spirit.
Provide efficient services to meet customer specifications and need by procuring materials and maintaining equipment and necessary infrastructure inahigh state of repair.
Recruit highly qualified staff and improve the skills of employees in order to maintain the quality of products and services that meet,or exceed, the customer expectation.
Unibiz family's staff party
Congrat from DICA
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်- ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်အနီးတန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစီမံကိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဆည်)
တောင်ငူမြို့၊ ပြည်တော်သာ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာ စီမံကိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)ပိုင်းမြို့နယ် ၁၁၂/စက်မူဇုန်၊ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊ အမှတ်(၂၅) ဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ တာမွေမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း( ၁၅၀' x ၈၀')အမိုးမြင့်အားကစား ခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မန္တလေးခိုင်လီစားသောက်ဆိုင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် Steel Structure (၁) ထပ်ခွဲဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Why Choose UNIBIZ?
We maintain BEST CUSTOMER SERVICE.
We serve customers BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATION.
We take RESPONSIBILITY & ACCOUNTABILITY.
We performance QUALITY ASSURANCE & EXPERTISE.
We keep ON TIME DELIVERY.
No.102, Building No.18, Kabar Aye Housing,
Wireless (3) Street,(9) Quarts,
No.(478, 480, 481), Corner of Tinetar Min Gyi Road
& Industry (8) Road, (144) Industry Zone,
Contact Number : +9595121317,
Email : unibizcompany@gmail.com,
Follow us : UNIBIZCo.,Ltd.
Copyright 2018 @ unibizmyanmar.com